DUGSIYADA MU’ASASADA MAKA AL- MUKARAMA OO AY KA SOCDAAN IMTIXAAN BILEEDKA 2017/2018 – Mecca Al -Mukarama Foundation
DUGSIYADA MU’ASASADA MAKA AL- MUKARAMA OO AY KA SOCDAAN IMTIXAAN BILEEDKA 2017/2018
Waxaa si habsami leh uga socda xarumaha dugsiyada hoos taga Mu’asasada Maka Al- Mukarama Imtixaan bileedka 2017/2018 oo si raxmi ah u billowday maalintii sabtiga oo ku beegnayd 23/09/2017, Imtixaanka ayaa soconaya muddo shan maalmood ah ujeeddada laga leeyahayna waxay tahay qiimaynta ardayga bilaha uu wax baranayey.
Xafiiska Waxbarashada Mu’asasada Maka Al- Mukarama ayaa qorsheeyey lix imtixaan oo ay ka qayb qaadan doonaan dhammaan ardayda wax ka barata dugsiyada hoos taga Mu’asasada waxa ayna kala yihiin imtixaannadaasi.
1- Imtixaanka bilaha Agoosto/Siteembar (5 dhibcood maaddo kasta).
2- Imtixaanka bilaha Oktoobar/Nofeembar (5 dhibcood maaddo kasta).
3- Imtixaanka Teeramka (20 dhibcood maaddo kasta).
4- Imtixaanka bilaha Jannaayo/ Febraayo (5 dhibcood maaddo kasta).
5- Imtixaanka bilaha Maarso/Abriil (5 dhibcood maaddo kasta).
6- Imtixaanka kama dambaysta (60 dhibcood maaddo kasta).
Ardayda wax ka barata dugsiyada Mu’asasada Maka Al- Mukarama ayaa ah kuwo si isku mid ah oo midaysan u gala imtixaannadaas iyadoo arday waliba dhibcaha uu keensado loo kaydiyo ka dibna si guud la isugu geeyo natiijooyinka lixda imtixaan ee kor ku xusan.